တောင်တန်းညဉ့်အခါဓာတ်ပုံနှင့်အားကစားဖြစ်ရပ်များ Vladislav Terziyski ၏ဓာတ်ပုံများ - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
ပြဿနာ3- ဒီဇင်ဘာလ 2015
Vladislav Terziyski ၏ဓာတ်ပုံများ
သူကအနည်းငယ်ကလေးကဖြစ်စဉ်အခါ, Vladislav Terziyski ၏မိဘများတောင်တော်သူ့ကို ယူ. , ဒါပေမယ့်မြင့်သောအရပ်သို့ သွား. ရန်သတိလိုဆန္ဒ 2002 ၌အပင်ပေါက်သော်လည်း။
ဓာတ်ပုံနှင့်အတူသူ၏ပထမဦးဆုံးထိတွေ့ - ဗီရိုထဲမှာ rummaging နေစဉ်, သူဟောင်းကင်မရာ "Zenith" တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူ 2010 အတွက်အလွန်တက်ကြွစွာရိုက်ကူးစတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာဆောင်းကာလကိုစဉ်အတွင်းသူကိုတောင်ပေါ်နှင်းလျှောစီးနှင့်အတူရွေ့လျားစတင်ကြောင်းထို့နောက်ဖြစ်ခဲ့သည်အရှင်လျင်မြန်စွာလက်လှမ်းမမှီပြီးလှပသောအရပ်တို့ကိုမရောက်ရှိနိုင်ဖြစ်ခြင်း။
ဓါတ်ပုံပညာယဇျပူဇျောတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်တဲ့တိုက်ပိတ်ဝါသနာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျနံနကျထရတောင်တော်ခေါင်မှတတဲမှထွက်သွားသောအခါ, အနီရောင်ကောင်းကင်ပြာနှင့်နေရောင်ကိုတက်လာရန်အကြောင်းအရာကနေမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းမှာရှာဖွေနေ, သင်အအေး, အရှည်လျားလမ်းလျှောက်အတွက်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုနေနားလည်သဘောပေါက် နှင့်စောစောထကတန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြသည်။
အိုင်ဗင် Belchev ဘို့ အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ Mag:
တစ်ဦးမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များကခေါ်ဆောင်သွားအဆိုပါဓာတ်ပုံများကိုတစ်ဦးအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ထောင့်ကနေအကျွမ်းတဝင်သောအရပ်တို့ကိုမပြပါ။ သင်၏ဓါတ်ပုံများအတွက်ကျွမ်းကျင်ပိုင်ရလဒ်များကိုနှင့်အတူကများ၏ပေါင်းစပ်။ အဘယ်အရာကိုသင်ပထမဦးဆုံးမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်နောက်ပိုင်းပြောင်းလဲပစ်ခဲ့သလဲ
ယခုဓာတ်ပုံပြပွဲပစ္စည်းကိရိယာများ, တဲအပြင်, အိတ်နှင့်အစားအစာအိပ်ပျော်နေသောငါသည်လည်းထိုသို့ဘက်ထရီနဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သယ်ဆောင်ကြောင့်။ ငါ၏အကျောပိုးအိတ်, သာ. လေး၏ လူအတော်များများကမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ပျံသန်းစေရန်လုံလောက်သည်နှင့်ရုပ်တုဆင်းတုသူ့ဟာသူအဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းထင်ပေမယ့်ဒီနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပျက်မထားဘူး။ ဒါဟာဓာတ်ပုံနဲ့၌ရှိသကဲ့သို့အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် - တဦးတည်းကောင်းတဲ့နေရာ, အမြင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်ကို select ပြီးတော့ညာဘက်အလင်းရှိခြင်းဘို့ဆုတောငျးရမညျ။
Vladislav Terziyski ©
ပင်အတော်လေးခေတ်မီဆန်းပြားဖြစ်ခြင်းသော်လည်းဤကစားစရာအလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမဟုတ်ကတည်းကမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နှင့်အတူသေနတ်ပစ်, အန္တရာယ်များသည်။ သူတို့ကစိုထိုင်းဆ, လေ, အပူချိန်, ရေဒီယိုညစ်ညမ်းမှုအပေါ်မူတည်, ငှက်များလည်းအဆိုပါမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏သမာဓိအလွန်အန္တရာယ်နဲ့တခြားအကြောင်းအချက်များဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။
တစ်အပိုင်းအစအမှိုက်ပုံသို့ BGN အတော်ကြာထောင်ပေါင်းများစွာကိုဖွင့်ဖို့မသကဲ့သို့တစ်နည်း, သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့အရာများစွာကိုယူရမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အခွအေနေတပျံသန်းနေစဉ်အတွင်းကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများတွင်ညာဘက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချခွင့်ပြု, ထိုမတိုင်မီပိုအတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့လိုသည်။
ညဥ့်မြင်ကွင်းများသင့်ရဲ့ Facebook ကို site ပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဓာတ်ပုံတွေအကြားရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုဥစ္စာများထဲမှ frame ရဲ့ပုံပြင်ပြောပြပါ။
ဒါဟာဆောင်းကာလကိုကာလအတွင်းအကြောင်း 10 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မဦးတည်ရာအထွတ်အထိပ် Musala နှင့်အတူ Borovets ထံမှတစ်ဦးတည်းမသွားခဲ့သည်။ ငါမှောင်မိုက်မှာရှိရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
ငါမိုးလေဝသဘူတာရုံများတွင်စားရန်တစ်ခုခုရှိခဲ့ခြင်းနှင့်လမ်းလျှောက်များ၏နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်တစ်ကြွင်းသောအရာကိုယူ။ ငါ tripod ကို ယူ. ထွက်သွားကြ၏ထို ... သင်ချစောင့်ကြည့်ကြယ်သန်းပေါင်းများစွာ၏ခံစားချက်တယ်။ ဝေးအရာအားလုံးကနေကသာသင့်ကိုယ်သင်နှင့်သဘောသဘာဝ, ထိုနေ့စဉ်ပြဿနာများကိုအထက်တွင်ဖြစ်ခြင်း။
အပူချိန်အနုတ်2ဒီဂရီခဲ့ပေမယ့်ဒီ 10 နာရီ imperceptibly လွန်ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ကသာနေတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်တဦးတည်းရဲ့လူနေမှုစေရန်တတ်နိုင်သမျှဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဤရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိသည်အထိ, သင်တို့ရှေ့ဘယျအရာလမ်းကြောင်းကိုပါသနည်း
အဘယျ "မနှစ်မြို့ဖွယ်" ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မမကြာခဏကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှဦးဆောင်သောဓာတ်ပုံပြပွဲပစ္စည်းကိရိယာများ၏နောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။
သူ / သူမတောင်များ likes လျှင်မည်သူမဆိုကပြောပါတယ်, "Oh, ဟုတ်တယ်, ငါတောင်များကြိုက်နှစ်သက်" ငါ့ကိုမေးခံရပေမယ့်အမှန်တရားလူအများစုကခက်ခဲကြောင့်၎င်းတို့၏လမ်းကိုရှာတွေ့ပါသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
Vladislav Terziyski အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ:
Youtube ကိုအပေါ် Vladislav Terziyski
Facebook ပေါ်မှာ Vladislav Terziyski
အနုပညာဗီလာ Orlova Chuka အဘိဓါန် - အဆင်းလှသောသဘာဝ Park မှာတည်းခိုခန်း
အဆိုပါကြီးမားတဲ့အိပ်မက်, ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်စွန့်စားမှု၏ insatiable ဝိညာဉျကို
သင်၏ CV Enhance - လမ်းမှပေါ်တက်အောင်မြင်မှု၏ထိပ်တက်ပြီး
Denislav Kanev ၏မှန်ဘီလူးမှတဆင့်ဘဲလေး၏ဤလောက
ပုံရိပ်တွေ, တောင်များ, ဓာတ်ပုံ, အားကစား | | rating:5/ 30